Hollywood uthanda ukudubula-movie lezigilamkhuba, ikakhulukazi uma kuziwa Elikhulu Ukudangalane Ukwenqatshelwa 30s kwekhulu elidlule. Kukhona opholile nokufeyila, azikho kahle kakhulu kodwa kukhona nje ekhexisayo. Okunjalo yanyatheliswa ngo 2012 futhi esethulwa eMihlanganweni Yesigodi ethi Cannes festival amafilimu "Lawless". Abadlali ngubani lwenziwa ifilimu izindima ezinkulu nezincane, cishe zonke ezidumile inkanyezi ababeyibone ayikwazanga kodwa kuthinta izinga ifilimu. Njengoba ngokuvamile kwenzeka, kwaba ukhonkolo eqinile wenza esinye band gangster inamandla ngempela.
Incwadi kanye ifilimu "Lawless"
Ubugebengu idrama wadedelwa e-United States nakwezinye izindawo emhlabeni ngaphansi kwegama "Lawless", kodwa eRussia, njengoba kuvamisile, ukuhunyushwa ingashintshwa ehlukile kakhulu. Cishe, kule nguqulo Russian kwegama wayebhekisele incwadi Math Bondyuranta "Ezinemvula Eningi Kunazo Zonke County Umhlaba", lapho umqondisi Dzhon Hillkout wadubula ifilimu yakhe. Esiqintini izincwadi, ngakho, ngokulandelana, futhi ifilimu kusekelwe izenzakalo zangempela.
Mat Bondyurant echazwe indaba Umkhulu akhe nabafowabo. Izenzakalo ezichazwe encwadini kwenzeka ngempela kule 30s eningizimu ye-United States. Phakathi Ukwenqatshelwa kwebhizinisi komhlaba ukudayisa utshwala engekho emthethweni, ngokuthi bootlegging, emangalisayo yanda. Whisky, isibonelo, kwakunokwenzeka ukuba asixoshe lutho. Empeleni, laba bazalwane abathathu babe Bondyuarta futhi bootleggers, owazama ukugcina ibhizinisi labo, naphezu kokuphikisa encintisana amaphoyisa elonakele.
Screenwriter Nik Keyv wazama ukwenza indaba ifilimu eduze ngangokunokwenzeka ukuze incwadi kangaka, okuyinto umoya ezikhethekile kakhulu ifilimu "Lawless". Abalingisi, futhi, walinika egcwele, ncamashi yonke uhlamvu emoyeni ngaleso sikhathi.
Uma usuqala ku-ifilimu mayelana izikhathi Okukhulu Kwezomnotho kwaqondana kunezinkinga zemali global ngo-2009, ngakho-abadali kwadingeka ukuba bahlehlise ngokudubula izithombe "Lawless". Abalingisi abaye babizwa ekuqaleni iphrojekthi, ngesizathu esisodwa noma kwenye abazange baqhubeke iphrojekthi. iqhaza nalehleliwe izinkanyezi ezifana Dzheyms Franko, Ryan Gosling, Emmi Adams Scarlett Johansson, owayenganikela ukudlala umlingiswa oyinhloko - Meggi Byuford. Kusukela Ukwakheka ekuqaleni amangalelwe kwaba kuphela Shaya Labaf. Nokho, ukuze ingene esikhundleni aphumayo edumile ngizile ngokulinganayo owaziwa futhi abadlali abanamakhono.
Le filimu "Lawless" - indaba nabafowethu abathathu. Naphezu kweqiniso lokuthi hero Shayi Labafa Jack - umzalwane abasebasha, indaba yakhe lisho ongaphambili. Ekuqaleni ifilimu usenguye kancane ukuzikhohlisa insizwa amaphupho usebenzisa bootlegging uwine inhliziyo intombazane Bertha Minnix eyadlalwa abasha ithembisa Mia Wasikowska, eyaduma indima "ethi Alice in Wonderland."
Ibhizinisi umndeni, Jack libhekisela ngempela ikwenze, ngaphandle ukungathi sína ngenxa, ngoba sikhulumela okuwukuphela kwendlela yokufika onothile kuye. Kuwo wonke umlando, okuningi njengoba zokuziphatha lukhula nokushintsha uhlamvu, ke kuqubuke impi. Esikhathini sokugcina, wayezimisele kakhulu futhi enamandla. Jack iba omele wangempela ebhizinisini lomkhaya. Ngokusho amahlebezi, LaBeouf ukuze ngokugcwele ukujwayela isithombe setha nogologo ngokuvamile idliwe akahambe ngokusebenzisa kakhulu kangangokuba umlingani wakhe Wasikowska ngisho ufuna ukushiya umsebenzi ngenxa yokuziphatha ukungadli umlingisi. Ngenxa yalesi sizathu, umlingisi kwenzeka skirmishes nge ekuskrini umzalwane Tom Hardy.
Ubani ngempela ophethe?
umzalwane Ephakathi, Forrest Bondyuranta kudlalwa ethandwa futhi abanamakhono Tom Hardy, elidume ngokuba nabantu amafilimu "kwekhaya" kanye "Warrior." Ngenxa neqiniso lokuthi wayeseholela ukulungiselela ngendima "The Dark Knight" kanyekanye necala lokudubula, okuyiwona kanzima yazuza yemisipha, e ifilimu umlingisi wakhe ukuze uthole okuningi onamandla angaphezu kuka incwadi. Kodwa ubunjalo isilinganiso Bondyuranta Hardy wanika eqondile kakhulu: ngokucophelela, iqonde, amnyama, kanzima, bakwazi ukuxazulula yonke imibuzo ebalulekile. It Forrest iyinhloko wangempela umndeni, umholi weqiniso. Edolobheni kukhona babemesaba futhi ehlonishwa yibo bonke, yi-sikaZwelonke kuya gangster wendawo. Kuye kwadingeka umthelela omkhulu kuye Meggi Byuford, ngawo ukubukeka kwalo, Omunye angase athi, ekuphileni.
Umzalwane enkulu Howard (adlalwa Clark Jason) kushiya binges, futhi ngempela, kwaba ngempela ukungabi qotho, wakhetha ukuya nge ukugeleza. Ngemva kokudabula utshwala, lokhu Goof bathandile KLWEBHEKA ezandleni zakhe. Kodwa umdlalo Clarke wesikhwama wahlabeka umxhwele kakhulu abakhiqizi, owadala ifilimu "Lawless" bathuma izincomo zabo mayelana nomdlali umqondisi "The Great Gatsby" Base Luhrmann.
Nokho, izinkanyezi hhayi kuphela like LaBeouf, Hardy Clarke, kungaba ozibongayo idrama ubugebengu "Lawless". Abalingisi, esebenza ekusekeleni izindima, futhi sithathe engengaphansi ovelele futhi abanamakhono. A brilliant Gary Oldman kudlalwa leqembu lezigilamkhuba uFloyd Benner ngendlela yakhe eyingqayizivele. Futhi umlingisi Australian Gay Pirs waziwa kakhulu amabhayisikobho "Inkulumo Wenkosi" futhi "Khumbula", ehlanganiswe esikrinini indima Charlza Reyksa ejenti. Futhi indima Maggie waya actress Dzhessike Chesteyn, irekhodi okuyinto hlu lufaka ezifana namaphrojekthi ephezulu iphrofayela njengo- "izinceku" futhi "Interstellar". Umngane Jack, Ikhilikithi Pate kudlalwa Deyn Dehaan.
-Brad Pitt: "U-Oscar" ngoba ifilimu? amaqiniso ezithakazelisayo
Channing Tatum: Filmography umlingisi brilliant
Evuthayo ithawula wesitimela. Ukufaka kusezandleni zakho
Pension "Arcadia" (Koblevo) - isevisi, amakamelo, ukubuyekezwa
Izindawo ezithakazelisayo kanye ezikhangayo Voskresensk
Mikhail Youzhny - tennis yisijaka